ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာပရိုဘောက်စ်များ | တိုယိုတာပရိုဘောက်စ်ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Estate Car (258)
A/C: Rear (16)
Cassette Radio (45)
Grey Toyota Probox DX 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Toyota Probox DX 2012
White Toyota Probox DX 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြ...
Lks 112 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Probox 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Lks 196 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Probox 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Pearl White Toyota Probox 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Lks 144 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota Probox 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Pearl White Toyota Probox 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Pearl White Toyota Probox 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Toyota Probox GL 2012
White Toyota Probox GL 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
White Toyota Probox 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
White Toyota Probox DX 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
Silver Toyota Probox 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင...
White Toyota Probox DX 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြ...
Silver Toyota Probox DX 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Pearl White Toyota Probox 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
White Toyota Probox DX 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
White Toyota Probox DX 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြ...
Toyota Probox DX 2007
White Toyota Probox DX 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
White Toyota Probox DX 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြ...
Silver Toyota Probox 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
White Toyota Probox DX 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
Toyota Probox DX 2010
Grey Toyota Probox DX 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
White Toyota Probox GL 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
Pearl White Toyota Probox 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
တိုယိုတာ ပရိုဘောက်စ်တွေကို ဂျပန်ဈေးကွက် အတွက် တိုယိုတာက ၂၀၀၂ ခုနှစ် လောက်ကစပြီး မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အသေးဆိုဒ်ရှိတဲ့ စတေရှင် ၀ဂ်ဂွန်တွေ ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်အဖြစ် ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ဆစ်စီနဲ့ တော်တော် တူတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ဘိုလီဗီယားနဲ့ မြန်မာမှာတော့ ညာမောင်းတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ပီရူးတို့လို့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဘယ်မောင်းကားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ပရိုဗောက်စ်တွေကို တက္ကစီ (အဌားကား) တွေအဖြစ် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ကားတွေ စစသွင်းလို့ရတဲ့ အချိန်တုန်းက တိုယိုတာ ပရိုဗောက်စ်ကားတွေဟာ ဒရိုင်ဘာတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကား တစ်စီး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဆီစားသက်သာခြင်း၊ လူစီးများများ ဆန့်ခြင်းနဲ့ ကုန်တင်ရတာ နေရာ ကျယ်ဝန်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုဗောက်စ်တွေဟာ ဗန်ကား အမျိုးအစားထဲမှာ ခေါ်ဆိုနိုင်အောင်ပါဝင်ပြီး နေရာ အရွယ်အစား ကျယ်ဝန်းကာ ဆီစား သက်သာတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃၀၀ စီစီနဲ့ ၁၄၀၀ စီစီ ( ဒီဇယ်)၊ ၁၅၀၀ စီစီတွေပါ ထွက်ရှိပါတယ်။ GL , DX, X ဂရိတ်စတဲ့ မော်ဒယ်တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး GL တော့ အရှေ့တံခါး နှစ်ခြမ်းမှာ ပါဝါ ၀င်းဒိုး ပါရှိပါတယ်။ DX ကတော့ ဒရိုင်ဘာ တံခါး တစ်ခြမ်းမှာပဲ ပါဝါ ၀င်ဒိုး ပါပါတယ်။ နောက်ပြီး DX တွေကို နောက် ၀ိုက်ဘား မပါရှိပဲ ဖြစ်ပြီးGL ကတော့ နောက်သုတ်ပါပါတယ်။ ဒီတော့ GL ဂရိတ်တွေကို အမြင့်စား မော်ဒယ်တွေလို သတ်မှတ်ရပါမယ်။ အော်တို မန်နျူးယယ် ရွေးနိုင်ပြီး ဒီဇယ်ဆိုရင် မန်နျူးယယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိုဘောက်တွေဟာ ဂျပန်မှာ လုပ်ငန်းသုံးတွေ အဖြစ် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အတွက် ဒီဇိုင်းက လေးထောင့်ကျပြီး ရိုးရှင်းပါတယ်။ မီးလုံးကလည်း လေးထောင့် စပ်စပ်ပါပဲ ။ အထဲမှာလည်း အစိတ်ပိုင်းတွေကို အကြမ်းပုံစံ တည်ရှိပြီး အဌားယာဉ်နဲ့ လုပ်ငန်းသုံးတွေ အတွက်တော့ အံ့ကိုက်ပါပဲ။
ပရိုဗောက်စ်တွေကို ပြည်တွင်းမှာ တစ်ပတ်ရစ်ပဲ စီးကြပါတယ်။ ဒီဇယ်ကားတွေကိုလည်း လူကြိုက်များကာ ဓတ်ဆီကားတွေကိုလည်း လူစီးများပါတယ်။ ဈေးကတော့ အရင်က ဆို ပရိုဗောက်စ်တွေဟာ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ ကိုမှ ဈေးနှုန်း ၁၁၅ သိန်း၊ ၁၂၀ ကျသင့်နေတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး ယခုတော့ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ အောက်နဲ့ လည်း ရနိုင်နေပြီး ဖြစ်ပြီး အများဆုံးမှာ ၁၁၀လောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဒီဇယ်ကားတွေဆိုလျှင်တော့ ကျပ်သိန်း ၁၂၀ ကျော်လောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ အရင်တုန်းက ၁၄၀ သိန်းလောက်ရှိတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း လေလံကနေလည်းကောင်း၊ ကား ကုမ္ပဏီတွေကနေလည်းကောင်း ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂ၇ိတ်မြင့်တွေမှာ မှန်ချိုး မှန်ခေါက်တွေကို ပါဝါ ခလုတ်နဲ့ လုပ်နိုင်ပါမယ်။ အတွင်းပိုင်းကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ကျယ်ဝန်းပြီး အဲယားကွန်း၊ ရေဒီယိုတွေတော့ ပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်တဲ့ သတင်းတွေအရတော့ ပရိုဘောက်ကားတွေထဲမှ ၁၃၀၀ စီစီ ပရိုဘောက်ဘောက်ကားတွေမှာ အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် မီးလောင်မှုတွေ ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မီးလောင်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဆီပိုက်နဲ့ အိပ်ဇောမှာ အရမ်း ကပ်နေပြီး အပူချိန်များလာတဲ့ အခါ ဆီပိုက် အရည်ပျော်ပြီး မီးလောင်မှုတွေ ဖြစ်ပွားရတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်. ။ ဒီ အတွက် ဖြေရှင်းမှု တစ်ရပ်အနေနဲ့ အိပ်ဇောပိုက်ကို နေရာ ရွေ့ပြီး တပ်ဆင်တာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆီပိုက်ကို နေရာပြောင်းတာ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။